« Fotoan-gasy » Misy fiantraikany ratsy amin’ny fampandrosoana
Lalana Zafy Albert Hotokanana amin’ny heriny anio
Nampahafantarina tetsy amin’ny lapan’ny tanàna Analakely omaly fa feno ny fepetra ahafahana mampitondra ny anaran’ny lalana manoloana ny kianjan’Alarobia izay mifanjohy amin’ny lalana Ranaivo Paul sy Andriatsihoarana ho lalana Zafy Albert.
Maud Vuyelwa Dlomo “Fanabeazana sy fampianarana no fanalahidin'ny fandrosoana”
Hankalazaina isaky 18 jolay ny andro ho an’i Mandela na ny « Mandela Day » araka ny fanapahana nataon’ny UNESCO tamin’ny 18 jolay 2009,
Lalana mampitohy an’Antananarivo sy Toamasina Nodinihina ny fahafaha-mamorona fihariana
Niditra tamin’ny andiany fahefatra tetsy amin’ny Carlton Anosy omaly ny fivorian’ireo komity anatiny misahana ny fanajariana ny tetikasa momba ny fanatsarana ny lalana mampitohy an’Antananarivo sy Toamasina (TatoM).
Fiaraha-miasa Hatao tanàna mpirahavavy Antananarivo sy Jerosalema
Hatao tanàna mpirahavavy ny kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny tanànan’i Jerosalema any Israel, raha araka ny vinavina.
Faha-60 taonan’ny mpandraharaha ny fonja Ho tapaka ny lalana
Mba hampirindra tsara ny fankalazana ny faha-60 taona niorenan’ny fandraharahana ny fonja malagasy anio dia mampandre ny avy eo anivon’ny fiadidiana ny
Kaominina Betsiaka sy Ambalan’Anjavy Baranahiny tanteraka ny fitrandrahana volamena
Anisan’ny faritra sompitry ny volamenan’i Madagasikara ny Kaominina Betsiaka sy Ambalan’Anjavy anatin’ny Distrikan’Ambilobe.
Gidragidra ara-tany Misy misompatra ny ONG Angela any Miarinarivo
Nividy ny tany ara-dalàna tany amin’ny tanànan’Andranomena, fokontany Ambohinirina, distrikan’i Miarinarivo, faritra Itasy ny Fikambanana ANGELA, mpanao asa soa, ny taona 1994, raha ny fanazavana azo.
Noho isika tsy namorona ny famataranandro na famantaranora ve no antony tsy nahaizantsika nitantana fotoana fahagola ka hatramin’izao sa ilay “kolontsain’ny fotoana” mihitsy no nisy lesoka ny antsika ?
Rehefa miresaka fotoan-gasy dia fahatarana lava izay no ao an-doha. Ny Ntaolo tokoa rehefa hilaza fotoana dia tsy mba niteny amin’ny 8 ora maraina na 9 ora maraina na 12 ora antoandro na amin’ny 8 ora alina fa dia “mivoaka omby” no anondroany ny amin’ny 8 ora maraina eo ho eo. “Mivoaka omby terabao” raha amin’ny 9 ora maraina eo ho eo. Toy izany koa ny “mitatao vovonana” sy ny “manokom-bary olona” sy ireo hafa marobe. Izany hoe tsy misy filazam-potoana matotra fa dia eo ho eo daholo. Efa tsapa hatrizay anefa izy io fa nisy fiantraikany amin’ny fampandrosoana ary ratsy ny vokany mitaha amin’ny “time is money”, izay kolontsain-dry zareo japoney. Lasa mora mifampiala bala ny mpifanao fotoana ka samy afaka milaza ho efa nandalo daholo saingy tsy nifankatazana. Na ireo manampahefana sy mpanapa-kevitra aza dia matetika tsy tia mampiasa loatra ny afaka ora 1 na ora 2 na afaka 30 minitra fa dia “rehefa avy eo”. Hita ho mandrafitra ny fomba fisainan’ny mpiara-monina mihitsy ilay fomba fanao izay heverina fa hodian’ny rehetra fanina ny maha ratsy azy.